SOOYAALKA SANADKII TEGAY SADEX BAA LAGA XASUUSTAA.By Cabdiraxiin Hilowle Galayr..
Friday February 19, 2010 - 12:22:11 in Wararka by Xarunta Dhexe
SARDHADA SHARIIF , SAHWIGA AWAYS, IYO SURGOOYADA SHABAAB
Waxaa aduunka sanad waliba reebaa sooyaal ama sawrac taariikheed oo uu kaga duwan yahay sanadihii kale iyada oo aanu sanadku lahayn sababta diintuna noo sheegtay in allaha awooda leh sanadka leeyahay siduu doonana sanadka ka dhigo balse waxaan ugu magacdarnaa
Sooyaalkii iyo sababtii sanadka maadama magaca ama xiliga uu yahay sanadka.
Hadaba sanadkii tegay ee 2009 waxaa dadku xasuustaan dhacdooyin badan oo ay ka mid ahaayeen siyaasadii xiinka waalnayd iyo soo dhawayntii dowlada shariif iyo saadaashii nabada iyo saxansaxadii qaran oo mar keliya si kale isu bedeshay .
Waxaa inta badan dadku hadal hayn jireen 1991 ilaa 1993 oo dagaalo badan oo kala nooca dalka soomaaliya ka dhaceen kuwaaso wajiyo jabhadeed iyo wajiyo qabiilba lahaa balse Waxaa ka xanuun batay sanadihiin ka danbeeyay ee 2006 ilaa 2009 oo ahaa sanadihii Ugu dhibaatada badnaa dadka iyo dalka .
Markii laysu dilayay qabiilka intaad qabiilkaaga dhex joogto waxaad helaysay nabad
Markii laysu dilayay jabhad iyo dowladna hadba kaad la joogta waad ka amaan helaysay
Balse markii ay timid in cadow dibada ka yimid ama itoobiyaan ha noqdo ama yugaandhiis ama carab iyo muhaajiriin kuwa la baxay ee danbilayaasha ka ah dalalkoodii.
Waxaa dhamaan ama gebi ahaan burburay badi gobolada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo ay colaada iyo dagaalada diimeed ku baaheen waxaa suulay nabadii oo aan weliba lahayn xal ama rajo dhaw oo la saadaalin karo inkastoo ay xuntahay quustu.
Hadaba aan u soo noqdo dulucda iyo ujeedada qoraalkayga oo u dhacaysaa sadexdaa
Maanlaawe ee maanta dalka ku hirdamayaa xaqiiqiyan aduunka waxaa ka dhacay dagaalo
Lagu hoobtay oo waliba cir iyo dhul laysu adeegsanayay balse dhulbalaadhsi iyo dhaqaalo badsi iyo awood sheegasho iyo martabado kala duwan ayaa loo dagaalamayay waxayna lahaayeen guulo laga gaadhay iyo waqti uu bilowday iyo waqti uu dhamaaday.
Hadaba inaga keenu waa mid ka duwan oo aan lahayn dhamaad iyo ujeedo ama guul laga gaadhi karo aan hayn in umada iyo maatada iyo shacabka la dabar jaro.
Miisaanka siyaasada hadaan usoo galno anigu mayhi siyaasi balse soomaalidaa ku maahmaahda sadar muuqdaa su,aal ka dhan oo maanta arimaha soomaaliya yaalaa waa tii xiligii casri jaahiligii anigaa kaa xoog wayn iyo anigaa kaa xoog wayn iyo is xulufaysigii.
Mararka qaar markaad dheehato taariikhdii unduluz waxaa kuu soo baxaysaa bidhaan halka maanta soomaaliya marayso oo ah mid la suulinayo jiritaanka umadeed ee dhaqan dhaqaale iyo diinteeda iyo caqiidadeeda iyo dhamaan assaaarta ama raadraaca umada soomaaliyeed Aan dib ugu noqdo erayadii ama halku dhigyadii iyo balanqaadyadii iyo arimihii sanadkii tegay a ay yidhaahdeen kooxaaha mucaaradka ah iyo DKM .
Waxuu yidhi shariifku waxaan umada ku dhaqayaa cadaalad sinaan iyo shareecada islaamka Balse waxuu ku dhaqay aamusnaan uu ka aamuso dhibka lagu hayo arxandaro uu awood u yeelan waayo inuu ka joojiyo madaafiicda iyo ciidamada yugandha iyo burundi ku garaacayaan iyaga oo aan dowlad iyo mucaarad iyo shacab midba u aabe yeelayn iyo kuwa soomaalida ah ee tuugada ah iyo axdiqarameedka oo iminka aan cidna lagala xishoon halkudhigyada ah , too ay meel walba la taagan yihiin buugii cabdilaahi yuusuf uu u qoray males sanaawi XBT ._257/28 qodobka ah waxuu dhigayaa in la samayn karo xaafado mid waliba madaxweyne leedahay qabiilka xaafadu ugu badan ka dhashay. Cajiib waa dhaxalkii dowladii midnimada qaran iyo jamhuuriyada islaamiga ah ee soomaaliya magacyom wacnaydaa !!!
Waxuu yidhi xasan daahir sahan ayaa inoo maqan oo yaan reerka la furin waxuu ku furay guri kutaan, xajiin , qaniin, dulin , gafane iyo shilin ka buuxdo shacabkii yidiidilada iyo dowladnimada iyo heshiiska wadada sugaya iyo inay maalin uun nastaan waxuu ka raray guryahoodii ay mar labaad soo hawaysteen markii cadoowgii amxaarku ka baxay inay yagleeshaan markay carareen ee ay banaanka u qaxeen meeshay nafta bideen waxuuna kaga daba tegay halkay ku noolaayeen isaga oo ilaa hada la daba taagan hadimo iyo hagardaamo iyo dhibaato aan kala go, lahayn waxuu sheegay inuu yahay kaluuun dadka shacabka ah baddii iyo biyihii aanuna weligiis lugta kala baxayn ilaa biyuhu ay banaanka iska soo dhigaan.
Waxuu ku caanbaxay nin jecel kursi balse nasiibku u diiday waxuuna balan ku qaaday
In riyadii cabdulaahi yuusuf yeeyba ay rumoowday isagana ay u rumoobi doonto balse isaga iyo shariifbaa waxaa seejiyay talada oo u diiday waxay jeclaayeen tiinkii ay shalay beereen waa alshabaab.
Shabaabka iyo halku dhigyadoodii , waxay diinta islaamka ah oo dhan ka soo qaateen hal qodob oo ah jihaad , waxay umada islaamka ah ka dhigeen gaalo waxayna soomaaliya ku beereen dhaqamo aan weligood ka dhicin sida is qarxinta is gaalaysiinta, diinta oo laga been sheego dumarka oo xoog lagu guursado danbiilayaasha ama nimanka aduunka oodhan wantedka ah oo lagu tilmaamo walaalo islaam ah oo xaqa ku taagan iyo islaamka iyo waalidka iyo walaalka iyo waxgaradka iyo culumada iyo dhamaan qaybaha bulshada oo gaalo lagu xukumo iyo rido oo nimaan qaadi ahayn fatwoon karin iska xukumo surkana ka gooyo
Waxay doorsheen diintii waxay dumiyeen dalkii wax dulmiyeen dadkii waxayna dab ku shideen dabarsame calankii soomaaliyeed.
Hadaba sanadkan cusub maxaan sugaynaa ilaahay waa sareeye isagaa awooda iska leh
Samaan iyo nabad iyo sinaana inooma waayin ee soomaali ayaa siloon oo marinka seegtaye
Siyaasadeena maka saarnaa qabiil iyo 4.5 maka saarnaa kanaa saxan oo waxbuu I siiyay
Maka saarnaa si kale kuma diidin ee waa sayncadaale oo sumad reer kale ayuu wataa.
Waxaan ku soo afjarayaa sooyaalka sanadkii hore dhawr sadar oo maanso ah .
Sadarada murtida iyo
Iyo soohdinteed nacay
Markii ay sakalantee
Si xun loo sibaaqee
Soofkeedii laga raray
Salowga iyo qaylada
Subaxnimo la toostee
Taajka aynu sudhanay
Sinaan iyo cadliyo nabad
Samaan iyo wanaagiyo
Saxnaan lagu tilmaamiyo
Saami dowladnima iyo
Soomaalay ka haysaan
Inuu samada duuloo
Hadba saylad joogoo
Sacab loo garaacoo
Sawaariij gantaala ah
Sun ku buufiyaanoo
Ka sareegan waayoo
Sifuhuu lahaa iyo
Sidii hore ma haysaan
Mise zero weeyaan?
Sacabka aynu tumaynee
Soo dhawoow lahaynee
Inuu suuqyadii xidho
Sabanka iyo kaaraha
Suuga iyo boobaha
Sifo diin ku taaliyo
Saymo wada barwaaqa ah
Saac iyo ugbaad leh
Saaka miyaad ku haysan
Silic iyo xanuuniyo
Sintoo ciida qabanliyo
Saxariir xun mooyee
Sahankii dhabta ahaa
Soomaalay ma haysaan
Mise zerro weeyaan.?
Kuwa sulubka haysteee
Isa sudha bombada ee
Surkiyo madaxa duubtee
Sakaraad ku ridayee
Susaydhka wada dhigay
Ee samaha necebee
Surka gooya maatada
Sifo aan ku raacnoo
Sax weeyaan nidhaahno
Soomaalaay ma haysaan
Waxaan ku soo afjarayaa maqaalkayga siyaasada soomaaliya weliba bartmaha iyo koonfurta
Malaha miyaa sahan ama saadaal aan dagaal iyo suluf iyo sirgac wadan?
Mise waa samanul aakhiroow waxay sugnaaba waa buunkii samada la yeeran lahaa
Soomaaliyeey ilaahay u noqda ogaadana waxaydaan is yeelin inaan aduunka iyo umad kale toona na yeeli karin.
Waa Qalinkii iyo Hall_abuurkii